10 युरोप मा सबैभन्दा दर्शनीय गोल्फ कोर्स | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 युरोप मा सबैभन्दा दर्शनीय गोल्फ कोर्स
हरियाली घाटी र पहाडहरु, विशाल घाँसे मैदान, युरोप मा सबैभन्दा रमणीय स्थानहरुमा, यी 10 युरोप मा सबैभन्दा सुन्दर गोल्फ कोर्स, विश्व मा शीर्ष गोल्फ क्लबहरु मध्ये केहि छन्. प्रत्येक गोल्फ कोर्स पूर्णता को लागी डिजाइन गरीएको छ, सुविधाहरु र प्राकृतिक सौन्दर्य को एक अद्भुत संयोजन.
1. गोल्फ नीलो हरियो Pleneuf-Val-Andre ब्रिटनी मा
को भव्य दृश्य संग अंग्रेजी च्यानल, Bluegreen Pleneuf Val Andre गोल्फ कोर्स अचम्मको छ. ब्रिटनी मा Bluegreen को गोल्फ कोर्स यूरोप मा सबैभन्दा सुन्दर गोल्फ कोर्स मध्ये एक हो.
हरियो हरियो कोर्स ब्रेटन समुद्री तट लाई हेराई गर्दछ, र नीलो समुद्र संग हरियो भूमि को संयोजन अद्भुत छ. साथै, तपाइँ एक मा खेल्नुहुनेछ 500 संसारमा सबै भन्दा राम्रो गोल्फ कोर्स.
2. स्क्यान्डिनेभियन नयाँ पाठ्यक्रम: कोपेनहेगन
25 कोपेनहेगन बाट किमी, नयाँ कोर्स गोल्फ कोर्स मा रैंक 50 युरोप मा शीर्ष गोल्फ कोर्सहरु प्रत्येक वर्ष. नयाँ कोर्स 36 छेद संग युरोप मा सबैभन्दा सुन्दर गोल्फ कोर्स मध्ये एक हो 25 वरिपरि हेक्टर वन.
प्राकृतिक पोखरीहरु को लागी धाराहरु, शान्त सुरम्य सेटिंग, र पुरस्कार विजेता काठ गोल्फ क्लब, पहिलो छेद को प्रवेश द्वार बाट तपाइँ चकित हुनेछ. ल्याण्डस्केप साँच्चै भव्य छ र दुनिया भर बाट धेरै golfers मोहित छ.
ह्याम्बर्ग एक ट्रेन संग कोपेनहेगन
एउटा रेलको साथ ज्यूरिखदेखि ह्याम्बर्ग
रटरडम एक रेल संग ह्याम्बर्ग
3. Castletown गोल्फ लिंक: मानिसको आइल
समुद्री हावा, जंगली फूलहरु, र आइल अफ म्यान को महाकाव्य दृश्य, Castletown गोल्फ लिंक कोर्स मा गल्फ खेल्न एक अविस्मरणीय अनुभव हो. आइल अफ म्यान यूरोप मा सबैभन्दा लुभावनी ठाउँहरु मध्ये एक हो, र गोल्फ कोर्स यूरोप मा सबैभन्दा सुन्दर गोल्फ कोर्स मध्ये एक हो.
तपाइँ सबै बाट समुद्र द्वारा घेरिएको छ3पक्षहरु, जब तपाइँ सुन्दर Langness प्रायद्वीप मा पाठ्यक्रम खेल्नुहुन्छ. चट्टानी तटरेखा समुद्री तट को विस्तार, गौरवशाली सूर्यास्त, रैंक Castletown गोल्फ लि 8th्कहरु ब्रिटेन र आयरल्याण्ड मा सबैभन्दा शानदार गोल्फ कोर्सहरुमा 8th. १th औं प्वालले हेराई गर्दछ आयरिश सागर, र १th औं प्वाल बाट दृश्य, ऐतिहासिक सेन्ट. माइकल्स आइल, 12th शताब्दी चैपल, दृश्यहरु जुन कुनै अनुभवी गोल्फर लाई विचलित गर्न सक्छ.
4. Tralee गोल्फ क्लब: आयरल्याण्ड
प्राकृतिक भूभाग मा सेट गर्नुहोस्, अटलांटिक महासागर र समुद्र तट देखी, आयरल्याण्ड मा Tralee गोल्फ कोर्स यूरोप मा सबैभन्दा अद्वितीय र दर्शनीय गोल्फ कोर्स मध्ये एक हो. तपाइँ भन्दा पहिले गहिरो नीलो को दृश्य संग हरियो पहाडहरु मा छेद को पीछा गरिनेछ.
यो सुन्दर १-होल गोल्फ कोर्स काउन्टी केरी मा छ, घर डिंगल प्रायद्वीप को लागी, र भव्य Killarney राष्ट्रिय निकुञ्ज. गोल्फ कोर्स को किनारहरु मा सेट गरीएको छ आश्चर्यजनक समुद्र तट, हरियो मूरल्याण्ड र प्रतिष्ठित दक्षिण पश्चिम आयरल्याण्ड संग.
5. गोल्फ क्लब क्रेन्स-सुर-सिएरे: स्विट्जरल्याण्ड
सबै भन्दा पुरानो मध्ये एक, अझै आधुनिक र सुसज्जित, युरोप मा गोल्फ कोर्स, स्विट्जरल्याण्ड मा Crans-sur-Sierre गोल्फ कोर्स युरोप मा सबैभन्दा सुन्दर गोल्फ क्लबहरु मध्ये एक हो. प्राकृतिक पोखरी, पहाड, र हरियो रमाईलो स्विस उपत्यका अद्भुत र उत्साहजनक दृश्यहरु छन्.
यो सुरम्य गोल्फ कोर्स हो स्विस आल्प्स मा, त्यसैले दृश्यहरु लुकाउने छन्. मोन्ट ब्ल्यांक र Matterhorn को दृश्य संग, यूरोप मा उच्चतम र सबैभन्दा सुन्दर पहाडहरु, तपाइँ यस गोल्फ कोर्स द्वारा चकित हुन बाध्य हुनुहुन्छ. Crans-sur-Sierre गोल्फ कोर्स एक हो सुन्दर रेल यात्रा टाढा जेनेभा देखि, र बर्न.
6. आयरल्याण्ड मा सबैभन्दा दर्शनीय गोल्फ कोर्स: पुरानो हेड गोल्फ लिंक
पुरानो टाउको Kinsale को शीर्ष मा बसेको, महासागरले घेरिएको, Kinsale गोल्फ कोर्स प्रदान गर्दछ प्राकृतिक दृश्य, आयरल्याण्ड र यूके को सबै भन्दा रमणीय दृश्यहरु.
हरियो चराहरु संग, असभ्य भूमिहरु, र समुद्री दृश्य, प्रतिष्ठित आयरिश परिदृश्य आश्चर्यचकित गर्न बन्द छैन. त्यसैले, तपाईं पुरानो हेड Kinsale गोल्फ कोर्स मा अद्भुत यार्ड द्वारा चकित हुनेछ. तपाइँ एक मा गल्फ खेल्नुहुनेछ 350 लाख पुरानो बलुआ ढु्गा चट्टान, समय को पाठ्यक्रम मा उत्तर सार्दै. यो उल्लेखनीय गल्फ कोर्स कर्क काउन्टी मा छ, नौकायन संग, माछा मार्ने, स्कुबा डाइभि, र अरु धेरै बाहिरी गतिविधिहरु यो सुरक्षित बन्दरगाह मा पानी उत्साहीहरु को लागी.
7. सबैभन्दा दर्शनीय गोल्फ कोर्स: Passier गोल्फ क्लब Meran दक्षिण टायरोल
यूरोप मा सबैभन्दा सुन्दर पहाडहरु को मनोरम दृश्य, Meran मा Passier गोल्फ क्लब उन्नत golfers को लागी एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान गर्दछ. यसबाहेक, दक्षिण Tyrol परिदृश्य संग, पोखरी, बंकर, र हरियो पहाडहरु, Passier गोल्फ क्लब एक अद्भुत स्थान र डिजाइन छ.
यसबाहेक, गल्फ कोर्स 18 प्वाल टेरेस्ड भूभाग मा फैलिएको छ, र हरियो चराहरु, गोल्फ को एक सप्ताहन्त को लागी दुनिया भर बाट गोल्फ खेलाडीहरु लाई आकर्षित गर्नुहोस्, वा Tyrolian प्रकृति को लागी एक लामो पलायन.
एक ट्रेन संग बोल्जानो Trento
एक ट्रेन संग बोल्जानो को लागी मिलान
बोलोग्ना बोल्जानो एक ट्रेन संग
भेनिस बोल्जानो एक ट्रेन संग
8. गोल्फ Eichenheim: अस्ट्रिया
बाक्लो अल्पाइन वन को बीचमा, वरिपरि काठको केबिनहरु, र घाँसे मैदान, Eichenheim गोल्फ कोर्स युरोप मा सबैभन्दा सुन्दर गोल्फ कोर्स मध्ये एक हो. ताजा अल्पाइन हावा, प्रकृतिको गन्ध, र प्राकृतिक वैभव विश्व मा सबै भन्दा राम्रो गल्फ खेलाडीहरु लाई प्रेरित गरेको छ. Eichenheim गोल्फ कोर्स छ 18 प्वाल, भन्दा बढि फैलिएको छ 6000 मीटर.
यो दर्शनीय गोल्फ कोर्स अस्ट्रिया मा सबै भन्दा राम्रो गोल्फ क्लबहरु मध्ये एक हो, उच्चस्तरीय सुविधाहरु संग: सौना, भित्री र बाहिरी पूल एक शानदार गोल्फ टूर्नामेंट पछि आराम गर्न. त्यहाँ तपाइँको जुनून को अभ्यास गर्न को लागी शानदार शर्तहरु संग अल्पाइन परिदृश्य जस्तै केहि छैन.
9. Gardagolf कन्ट्री क्लब: इटाली
From Manerba-Fort of the palace of Soianoto the hills of Polpenazze and castle, the Gardagolf Club offers scenic views of olive trees and Lake Garda. Gardagolf कोर्स छ 27 प्वाल, छरिएको 110 हेक्टरमा, आश्चर्यजनक लोम्बार्डी क्षेत्र मा.
यो सुरम्य गोल्फ कोर्स Valtenesi को पहाडहरु बाट घेरिएको छ, सबैभन्दा उन्नत र गम्भीर गोल्फ खेलाडीहरु को लागी उत्साहजनक र जादुई दृश्यहरु प्रदान गर्दै. रातो कोर्स Gardagolf मा सबैभन्दा सुन्दर कोर्स हो, वरिपरि फूल र अग्लो रूखहरु संग.
Trento ताल Garda Peschiera एक ट्रेन संग
Bolzano Bozen एक ट्रेन संग लेक Garda Peschiera को लागी
बोलोग्ना लेक Garda Peschiera एक ट्रेन संग
भेनिस ताल Garda Peschiera एक ट्रेन संग
10. Andermatt गोल्फ कोर्स: स्विट्जरल्याण्ड
अर्को स्विस रत्न, Andermatt गोल्फ कोर्स हाम्रो बन्द गर्दछ 10 यूरोप सूची मा सबैभन्दा सुन्दर गोल्फ कोर्स. Andermatt गोल्फ कोर्स एक सुन्दर स्विस घाटी मा छ. आकाश चुम्बन गर्दै हिमालको चुचुरो, हरियाली हरिया पहाडहरु, र एक पोस्टकार्ड जस्तै परिदृश्य.
स्थान धेरै लुभावनी छ, कि सबै भन्दा ध्यान केन्द्रित खेलाडीहरु पनि सुन्दर Ursern घाटी द्वारा विचलित गर्न सकिन्छ. Andermatt गोल्फ कोर्स सुन्दरता संग प्रकृति को हिस्सा हुन डिजाइन गरीएको थियो र पर्यावरण मैत्री छ. तपाइँ देख्नुहुनेछ पानी को धाराहरु र फूल घास का मैदान आश्चर्यजनक गल्फ कोर्स मा शामिल. छन् 18 छनौट गर्न को लागी प्वाल. साथै, बलियो पहाड हावा उत्साही गोल्फर को लागी एक चुनौती छ, आफ्नो खेल माथि.
बर्न एक रेल संग Interlaken
हामी मा एक ट्रेन सेव तपाइँलाई एक पटक मा एक जीवन भर यात्रा को योजना मा मद्दत गर्न खुशी हुनेछ 10 रेल द्वारा यूरोप मा सबैभन्दा सुन्दर गोल्फ कोर्स.
के तपाइँ तपाइँको ब्लग पोस्ट "1o युरोप मा सबैभन्दा सुन्दर गोल्फ कोर्स" तपाइँको साइट मा एम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-scenic-golf-courses-europe%2F%3Flang%3Dne< - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)